ရန်ကုန်မြို့က Ramen တွေထဲ ဘယ်Ramen အကောင်းဆုံးလဲ? (Ramen Battle)
8 Aug 2018 . 6:11 PM
ဂျပန်အစားအစာဟေ့လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ရေညှိထမင်းလိပ်ထားတဲ့ ဆူရှီတွေ၊ ဝါဆာဘီလေးနဲ့တွဲစားရတဲ့ တူနာ၊ ဆယ်လ်မွန်လွှာ Sashimi တွေအပြင် မပါမဖြစ်ပါတဲ့ မြန်မာတွေအကြိုက်ဆို Ramen ခေါက်ဆွဲလေးတွေပဲဆိုတာ ငြင်းမရဘူးလေနော်။
ရန်ကုန်မှာ ဂျပန်အစားအစာဆိုင်တွေပေါလာတာနဲ့အမျှ ဂျပန်စာဆိမ့်ဆိမ့်လေးတွေကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းကြိုက်တဲ့ ကိုယ်တွေအဖို့ အရသာအရှိဆုံးလို့ ပြောရရင်တော့ Ramen ပဲလေ။လက်လုပ်ခေါက်ဆွဲသားအိအိလေးတွေ၊ အသားလွှာလေးတွေ၊ ရေညှိဖတ်လေးတွေအပြင် တမူထူးတဲ့ အရည်အရသာနဲ့ချက်ထားတဲ့ Ramen ကောင်းကောင်းလေးတစ်ပွဲစားလိုက်ရရင် ဗိုက်လည်းတင်း၊ ခံစားမိသမျှ အရသာအာရုံတွေလည်း ပြည့်ဝပြီး ကောင်းလွန်းလို့ အဲ့လို Ramen ချစ်သူတွေအတွက် ဂျပန်ဆိုင်တွေထဲမှာမှ ရန်ကုန်မှာနာမည်အကြီးဆုံး Ramen ၃ မျိုးကို ရွေးချယ်ပြီး ဘယ် Ramen အကောင်းဆုံးလဲ အဖြေညှိမယ့် Ramen Battle ကို ဒီတပတ် ပြန်ဖော်ထုတ်ပေးပါ့မယ်လို့…
Ramen ဆိုင်ကောင်းကောင်းတွေထဲမှာမှ Akhayar က အကောင်းဆုံးလို့ ညွှန်းဆိုချင်တဲ့ထဲမယ် Ramen Ippudo ရယ်၊ Sushi Tei ရယ်၊ ဟိုးအရင်တည်းက Ramen တစ်ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Ramen Monster ရယ် ၃ဆိုင်ကို ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ Ramen ချက်ပြုတ်တဲ့အရည်၊ ခေါက်ဆွဲသား၊ ပါဝင်ပစ္စည်း၊ ပါဝင်တဲ့ ပမာဏ၊ ဈေးနှုန်း ပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေအကြိုက် Ramen က ဘယ်တစ်ခုဖြစ်မလဲဆိုတာ ရွေးချယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ-
(၁) Ramen Ippudo
Junction City ၅ လွှာမှာ ဆိုင်ကြီးဟီးထနေတဲ့ Ramen Ippudo က နာမည်နဲ့လိုက်အောင် Ramen ကို အဓိက ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးပေါ့။ သူ့ဆီမှာ Ramen အမျိုးအစား ၅,၆မျိုးကို အဓိက ထားရောင်းတာပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ Ramen က ကြက်သားရှိုယုဆိုတဲ့ Ramen ပါ။ သူက ပဲငံပြာရည်ကိုအဓိကသုံးပြီး Ramen ပြုတ်ရည်ကို အကြည်လေးချက်ထားတာ။
အသားအနေနဲ့ ကြက်သားအပြား၂ပြားလောက်ပါမယ်။ အလှဆင်ထားတဲ့ ကဏန်းပြားလိုအဖတ်လေးပါမယ်။ မုန်ညင်းရွက်၊ ရေညှိတစ်ချပ်၊ မှိုနည်းနည်း ဒီလောက်ပဲ။ အရသာဆိုရင်တော့ ခေါက်ဆွဲသားကအစ အိပြီး အရည်လေးလေးပင်ပင်လေးနဲ့ မွှေးတယ်။ ခံတွင်းရှင်းတယ်။ ကြက်သွန်မြိတ်လေးတွေနဲ့ မွှေးတေးတေးလေး။ မျှစ်နုနုလေးတွေက ချဉ်တယ်ဆိုရုံလေး အားဖြည့်ပေးထားတယ်။ စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Ramen ရဲ့ History မှာ ကြက်ဥထည့်ထားပြီး တကယ်လာချတော့ ကြက်ဥမကျက်တကျက်ပြုတ်လေးတော့ တစိမှမပါခဲ့တာ ဝမ်းနည်းတယ်။
ဈေးနှုန်းကတော့ ၄၉၀၀+ tax ဆိုတော့ ၅၆၀၀ လောက်ကျမယ်။ Rating ပေးရရင်-
ပမာဏ-4Stars
အရသာ- 3.5 Stars
ပါဝင်ပစ္စည်း-4Stars
ဈေးနှုန်း-3.5 Stars ပေးရမယ့် Ramen ပါ။
(၂) Sushi Tei
Sushi Tei ကတော့ ဂျပန်စာနဲ့ပတ်သက်ရင် တကယ့် နာမည်ကြီးပါ။ ဓမ္မစေတီလမ်းမပေါ် Savoy Hotel ရှေ့မှာ ဟီးနေအောင်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကြီးပေါ့။ သူ့ဆီမှာ တော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ Ramen အမျိုးအစား ၄,၅မျိုးရပါတယ်။ ကိုယ်တွေမြည်းခဲ့တာကတော့
Spicy Miso Ramen ပါ။ ရေညှိဟင်းချိုပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်လေးကို ရေညှိဖတ်လေးတွေရယ်၊ ကဏန်းပြားလေးရယ်၊ ငရုတ်သီးအစပ်မှုန့်လေးတွေရယ် ဒီလောက်ပဲပါပါတယ်။ ဘာအသားမှတော့ မပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရသာအရှိဆုံး Ramen တစ်ပွဲကိုစားရသလိုပါပဲ။ ဗမာပါးစပ်နဲ့အစပ်အဟပ်တည့်တယ်။ စပ်စပ်ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ ခေါက်ဆွဲတစ်ပွဲလုံးကိုအရည်က ထိန်းသွားတာမျိုးပါ။
ဈေးကတော့ ၅၅၀၀ + Tax ပါ။ သူ့ကို Rating ပေးရရင်-
အရသာ- 4.5 Stars
ပါဝင်ပစ္စည်း-3Stars
ဈေးနှုန်း-3.5 Stars ပေးချင်ပါတယ်။
(၃) Ramen Monster
ဒီဆိုင်ကတော့ လှည်းတန်းစင်တာရယ် Junction Mawtin ရယ် Myanmar Plaza မှာရှိတာပါ။ Ramen နဲ့ပတ်သက်ရင် ဈေးကွက်ထဲ လူတိုင်းသတိထားမိလာစေတဲ့ Ramen မိတ်ဆက်သူလို့ပြောရမလိုပါပဲ။ ဒီဆိုင်မှာ Ramen အမျိုးအစားချည်း ၁၀ မျိုးကျော်ရတယ်ဆိုတော့ တော်တော်စုံတယ်ပြောရမယ်။
ကိုယ်တွေစားခဲ့တဲ့ Spicy Ramen ကတော့ ပါဝင်ပစ္စည်းတော်တော့်ကိုစုံပါတယ်။ ဝက်သားပြား၊ မျှစ်အခြောက်၊ ပဲပင်ပေါက်၊ ရေညှိ၊ ကြက်သွန်မြိတ် အစုံအစိပါပါတယ်။ နောက်ထပ်သဘောကျမိတာက ပွဲတစ်ပွဲကို တစ်ယောက် ဗိုက်အကားစားလို့ရအောင် အပြည့်ပါတာဆိုတော့ မဆိုးဘူးပြောရမယ်။ အသားပြားလည်း ပါတော့ ဈေးနှုန်း ၄၃၀၀ လောက်ပေးရတာ တန်တယ်ထင်တာပဲနော်။ အရည်အရသာကတော့ ဒီလောက်ကြီး ညွှန်းရလောက်အောင် အရမ်းကောင်းတယ်လို့ မခံစားမိခဲ့ဘူး။
တစ်နည်းပြောရရင် လျှာထဲမငြိဘူးဆိုရမယ်။ ဒီ Ramen Monster ကို Rating ပေးရရင်တော့-
ပမာဏ-5Stars
ဈေးနှုန်း-5Stars ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီ Ramen ၃ မျိုးလုံးကို တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးတမ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အရသာကတော့ ခံတွင်းရှင်းရှင်းပေါ့ပေါ့ပါးပါးစားချင်သူတွေအတွက် Ramen Ippudo က ရွေးချယ်သင့်တဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပြီး ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ဗမာပါးစပ်အကြိုက် အရသာရှိရှိစားချင်ရင်တော့ Sushi Tei က အမိုက်ဆုံးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Ramen ကို ကြိုက်ရာအမျိုးအစားကိုမှ ဗိုက်အဝပြဲ ဆွဲချင်သူတွေကတော့ Ramen Monster ကို ဒိုးသင့်ပါကြောင်း စားခဲ့သမျှ Ramen တွေထဲက သတင်းစုံလင် Ramen ပြိုင်ပွဲဖြစ်စဉ်လေးကို အသေးစိတ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ကဲ…ဘော်ဒါတို့ထဲမှာရော ဘယ် ဆိုင်က Ramen က စားပြီးရင်းပြန်ပြန်စားချင်အောင်ထိ စွဲလမ်းစေခဲ့လဲ? အဲ့လို ခနခနသွားစားရလောက်တဲ့ Ramen ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးရှိရင်လည်း အလင်းပြခဲ့ဦးနော်။ အစားချစ်သူအချင်းချင်း ပြန်လည်မျှဝေရတာ ပျော်စရာပဲမဟုတ်လား ဗျာတို့။
ရနျကုနျမွို့က Ramen တှထေဲ ဘယျRamen အကောငျးဆုံးလဲ? (Ramen Battle)
ဂပြနျအစားအစာဟလေို့ ပွောလိုကျတာနဲ့ ရညှေိထမငျးလိပျထားတဲ့ ဆူရှီတှေ၊ ဝါဆာဘီလေးနဲ့တှဲစားရတဲ့ တူနာ၊ ဆယျလျမှနျလှာ Sashimi တှအေပွငျ မပါမဖွဈပါတဲ့ မွနျမာတှအေကွိုကျဆို Ramen ခေါကျဆှဲလေးတှပေဲဆိုတာ ငွငျးမရဘူးလနေျော။
ရနျကုနျမှာ ဂပြနျအစားအစာဆိုငျတှပေေါလာတာနဲ့အမြှ ဂပြနျစာဆိမျ့ဆိမျ့လေးတှကေို စှဲစှဲလမျးလမျးကွိုကျတဲ့ ကိုယျတှအေဖို့ အရသာအရှိဆုံးလို့ ပွောရရငျတော့ Ramen ပဲလေ။လကျလုပျခေါကျဆှဲသားအိအိလေးတှေ၊ အသားလှာလေးတှေ၊ ရညှေိဖတျလေးတှအေပွငျ တမူထူးတဲ့ အရညျအရသာနဲ့ခကျြထားတဲ့ Ramen ကောငျးကောငျးလေးတဈပှဲစားလိုကျရရငျ ဗိုကျလညျးတငျး၊ ခံစားမိသမြှ အရသာအာရုံတှလေညျး ပွညျ့ဝပွီး ကောငျးလှနျးလို့ အဲ့လို Ramen ခဈြသူတှအေတှကျ ဂပြနျဆိုငျတှထေဲမှာမှ ရနျကုနျမှာနာမညျအကွီးဆုံး Ramen ၃ မြိုးကို ရှေးခယျြပွီး ဘယျ Ramen အကောငျးဆုံးလဲ အဖွညှေိမယျ့ Ramen Battle ကို ဒီတပတျ ပွနျဖျောထုတျပေးပါ့မယျလို့…
Ramen ဆိုငျကောငျးကောငျးတှထေဲမှာမှ Akhayar က အကောငျးဆုံးလို့ ညှနျးဆိုခငျြတဲ့ထဲမယျ Ramen Ippudo ရယျ၊ Sushi Tei ရယျ၊ ဟိုးအရငျတညျးက Ramen တဈခတျေစားခဲ့တဲ့ Ramen Monster ရယျ ၃ဆိုငျကို ယှဉျကွညျ့လိုကျရအောငျ။ Ramen ခကျြပွုတျတဲ့အရညျ၊ ခေါကျဆှဲသား၊ ပါဝငျပစ်စညျး၊ ပါဝငျတဲ့ ပမာဏ၊ ဈေးနှုနျး ပျေါမူတညျပွီး ကိုယျတို့ မွနျမာလူမြိုးတှအေကွိုကျ Ramen က ဘယျတဈခုဖွဈမလဲဆိုတာ ရှေးခယျြကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ-
Junction City ၅ လှာမှာ ဆိုငျကွီးဟီးထနတေဲ့ Ramen Ippudo က နာမညျနဲ့လိုကျအောငျ Ramen ကို အဓိက ရောငျးတဲ့ဆိုငျကွီးပေါ့။ သူ့ဆီမှာ Ramen အမြိုးအစား ၅,၆မြိုးကို အဓိက ထားရောငျးတာပါ။ အားလုံးအဆငျပွအေောငျ ရှေးခယျြခဲ့တဲ့ Ramen က ကွကျသားရှိုယုဆိုတဲ့ Ramen ပါ။ သူက ပဲငံပွာရညျကိုအဓိကသုံးပွီး Ramen ပွုတျရညျကို အကွညျလေးခကျြထားတာ။
အသားအနနေဲ့ ကွကျသားအပွား၂ပွားလောကျပါမယျ။ အလှဆငျထားတဲ့ ကဏနျးပွားလိုအဖတျလေးပါမယျ။ မုနျညငျးရှကျ၊ ရညှေိတဈခပျြ၊ မှိုနညျးနညျး ဒီလောကျပဲ။ အရသာဆိုရငျတော့ ခေါကျဆှဲသားကအစ အိပွီး အရညျလေးလေးပငျပငျလေးနဲ့ မှေးတယျ။ ခံတှငျးရှငျးတယျ။ ကွကျသှနျမွိတျလေးတှနေဲ့ မှေးတေးတေးလေး။ မြှဈနုနုလေးတှကေ ခဉျြတယျဆိုရုံလေး အားဖွညျ့ပေးထားတယျ။ စားလို့ကောငျးတယျဆိုတဲ့အထဲမှာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Ramen ရဲ့ History မှာ ကွကျဥထညျ့ထားပွီး တကယျလာခတြော့ ကွကျဥမကကျြတကကျြပွုတျလေးတော့ တစိမှမပါခဲ့တာ ဝမျးနညျးတယျ။
ဈေးနှုနျးကတော့ ၄၉၀၀+ tax ဆိုတော့ ၅၆၀၀ လောကျကမြယျ။ Rating ပေးရရငျ-
ပါဝငျပစ်စညျး-4Stars
ဈေးနှုနျး-3.5 Stars ပေးရမယျ့ Ramen ပါ။
Sushi Tei ကတော့ ဂပြနျစာနဲ့ပတျသကျရငျ တကယျ့ နာမညျကွီးပါ။ ဓမ်မစတေီလမျးမပျေါ Savoy Hotel ရှမှေ့ာ ဟီးနအေောငျဖှငျ့ထားတဲ့ဆိုငျကွီးပေါ့။ သူ့ဆီမှာ တျောတျောနာမညျကွီးတဲ့ Ramen အမြိုးအစား ၄,၅မြိုးရပါတယျ။ ကိုယျတှမွေညျးခဲ့တာကတော့
Spicy Miso Ramen ပါ။ ရညှေိဟငျးခြိုပဈြပဈြနှဈနှဈလေးကို ရညှေိဖတျလေးတှရေယျ၊ ကဏနျးပွားလေးရယျ၊ ငရုတျသီးအစပျမှုနျ့လေးတှရေယျ ဒီလောကျပဲပါပါတယျ။ ဘာအသားမှတော့ မပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အရသာအရှိဆုံး Ramen တဈပှဲကိုစားရသလိုပါပဲ။ ဗမာပါးစပျနဲ့အစပျအဟပျတညျ့တယျ။ စပျစပျဆိမျ့ဆိမျ့လေးနဲ့ ခေါကျဆှဲတဈပှဲလုံးကိုအရညျက ထိနျးသှားတာမြိုးပါ။
ဈေးကတော့ ၅၅၀၀ + Tax ပါ။ သူ့ကို Rating ပေးရရငျ-
ပါဝငျပစ်စညျး-3Stars
ဈေးနှုနျး-3.5 Stars ပေးခငျြပါတယျ။
ဒီဆိုငျကတော့ လှညျးတနျးစငျတာရယျ Junction Mawtin ရယျ Myanmar Plaza မှာရှိတာပါ။ Ramen နဲ့ပတျသကျရငျ ဈေးကှကျထဲ လူတိုငျးသတိထားမိလာစတေဲ့ Ramen မိတျဆကျသူလို့ပွောရမလိုပါပဲ။ ဒီဆိုငျမှာ Ramen အမြိုးအစားခညျြး ၁၀ မြိုးကြျောရတယျဆိုတော့ တျောတျောစုံတယျပွောရမယျ။
ကိုယျတှစေားခဲ့တဲ့ Spicy Ramen ကတော့ ပါဝငျပစ်စညျးတျောတေျာ့ကိုစုံပါတယျ။ ဝကျသားပွား၊ မြှဈအခွောကျ၊ ပဲပငျပေါကျ၊ ရညှေိ၊ ကွကျသှနျမွိတျ အစုံအစိပါပါတယျ။ နောကျထပျသဘောကမြိတာက ပှဲတဈပှဲကို တဈယောကျ ဗိုကျအကားစားလို့ရအောငျ အပွညျ့ပါတာဆိုတော့ မဆိုးဘူးပွောရမယျ။ အသားပွားလညျး ပါတော့ ဈေးနှုနျး ၄၃၀၀ လောကျပေးရတာ တနျတယျထငျတာပဲနျော။ အရညျအရသာကတော့ ဒီလောကျကွီး ညှနျးရလောကျအောငျ အရမျးကောငျးတယျလို့ မခံစားမိခဲ့ဘူး။
တဈနညျးပွောရရငျ လြှာထဲမငွိဘူးဆိုရမယျ။ ဒီ Ramen Monster ကို Rating ပေးရရငျတော့-
ဈေးနှုနျး-5Stars ပေးခငျြပါတယျ။
ဒီ Ramen ၃ မြိုးလုံးကို တဈနတေ့ဈမြိုး မရိုးတမျးစားကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ အရသာကတော့ ခံတှငျးရှငျးရှငျးပေါ့ပေါ့ပါးပါးစားခငျြသူတှအေတှကျ Ramen Ippudo က ရှေးခယျြသငျ့တဲ့ဆိုငျလေးဖွဈပွီး ပဈြပဈြနှဈနှဈ ဗမာပါးစပျအကွိုကျ အရသာရှိရှိစားခငျြရငျတော့ Sushi Tei က အမိုကျဆုံးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ Ramen ကို ကွိုကျရာအမြိုးအစားကိုမှ ဗိုကျအဝပွဲ ဆှဲခငျြသူတှကေတော့ Ramen Monster ကို ဒိုးသငျ့ပါကွောငျး စားခဲ့သမြှ Ramen တှထေဲက သတငျးစုံလငျ Ramen ပွိုငျပှဲဖွဈစဉျလေးကို အသေးစိတျတငျပွလိုကျရပါတယျ။
ကဲ…ဘျောဒါတို့ထဲမှာရော ဘယျ ဆိုငျက Ramen က စားပွီးရငျးပွနျပွနျစားခငျြအောငျထိ စှဲလမျးစခေဲ့လဲ? အဲ့လို ခနခနသှားစားရလောကျတဲ့ Ramen ဆိုငျကောငျးကောငျးလေးရှိရငျလညျး အလငျးပွခဲ့ဦးနျော။ အစားခဈြသူအခငျြးခငျြး ပွနျလညျမြှဝရေတာ ပြျောစရာပဲမဟုတျလား ဗြာတို့။